Isitolo Sami Sezipho | UDavid Bridburg Artist
Ungasithenga Kanjani Isitolo Sami Sezipho
Umsebenzi wobuciko wawo wonke umuntu
Ufuna okuthile okusha nokuhlukile kwezobuciko. Ingabe kufanele isebenze? Ngabe ufuna indlela entsha ngokuphelele yokwenza ubuciko?
Ubuciko be-My Post Modern buhilela ubuhle obungakaze ububone namuhla.
Emuva ekolishi ngaziphonsela inselelo yokuthi ngingavezi imidwebo engokomfanekiso noma engabonakali. Kusho ukuthini lokhu? Bengifuna ukwenza okuthile okuhluke kakhulu. Amakhompyutha anikeza umculi wanamuhla ikhono lokukhipha ngezindlela ezimbili ezintsha emazingeni amakhulu namancane emsebenzini.
Yini eyenza lo msebenzi wehluke kangaka? Ukukhetha kwami ​​isihloko sendaba. Njengomculi ophuma kokunye, angiyenzi eyokulingisa. Imvamisa ngakha izingcezu zobuciko ezinhle kakhulu ngezindlela ezihluke ngokuphelele.
Kuhlukaniswe iMonet engu-18 nguDavid Bridburg
Ukuphrinta kuza njengendwangu, i-photopaper, insimbi, i-acrylic nokhuni. Ukubiyela nokulinganisa kutholakala uma kufunwa. Kusetshenziswa izinto ezisezingeni eliphakeme zemuseum.
Okwakamuva 11 nguDavid Bridburg
Ukufakwa kwamaqabunga kunenye yezinguqulo zami zeVincent van Gogh's "Almond Blossoms". Ngisebenzisa kabusha izithombe engizenzayo kuyo yonke imisebenzi yami.
Isigingci Sikagesi e-Orange Red nguDavid Bridburg aka JazzDaBri
I-JazzDaBri, aka David Bridburg, iqoqo ukuzama ukushada imidwebo yemigqa emincane ngamafomu angaqondakali. Uchungechunge luyadlala. Kunezinsimbi zomculo ezingama-21 ezahlukahlukene eza ngakunye ngemuva kwezindawo ezi-4 ezinemibala ehlukene.
Uchungechunge olwenzelwe isitudiyo somculo, abancane abaqala ukudlala, uthisha womculo nalabo abawuthandayo umculo.
Amanothi Omculo 32 kaDavid Bridburg
Iqoqo lePost Contemporary Collection ligcina izithombe zami zezilwane. Izinja, izimpisi, impungushe, amakati amakhulu, inkawu, i-walrus nokuningi… .. Kungani isihloko esithi “Music Notes x”? Isimeli nje sendawo esivame kakhulu thina baculi esikwenzayo ku- "Untitled x".
Ngenkathi ubuciko besikhathi samanje buthengisa ngendaba yomsebenzi njengezinto ezithunyelwe umsebenzi wobuciko wanamuhla zibuyisela impilo entweni. Lokhu ukuphawula komphakathi ngomuntu.
Manje sekungunodoli wepulasitiki. Ngicabanga ukuthi angikwazi ukuzisiza. Kwakufanele ngijule. I-LOL
Iqoqo leContemporary lilandelela ukuthuthuka kwesihloko kube yinto njengoba uchungechunge luqhubeka.
Ngiyabonga kumakhasimende ami. Labo abangithengile kaningi, nisize ekwenzeni umsebenzi wami ube yiqiniso. Labo abangithola okokuqala bayamukelwa.
Ngizimisele kakhulu kunakuqala kwezobuciko. Okwakamuva ukungena kwami ​​emhlabeni we-crypto NFT. Njengabaculi abaningi njengakamuva. Engikuthembisa khona ukukwenza ngendlela yami eyingqayizivele.
PS, angiyena obhemayo, kepha lawo maqabunga enza ubuciko obuthile impela.